यी हुन इमेल तथा सामाजिक सञ्जालका सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalयी हुन इमेल तथा सामाजिक सञ्जालका सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड
Home सुचना प्रबिधि यी हुन इमेल तथा सामाजिक सञ्जालका सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड
यी हुन इमेल तथा सामाजिक सञ्जालका सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड
काठमाडौं : तपाइृले आफ्नो इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमा कस्तो पासवर्ड राख्नु भएको छ ? एक पटक विचार गर्नुस त ? तपाईले राख्नु भएको पासवर्ड साच्चै मजबूत छ त ? वा छैन । यदि छैन भने तपाईले ईमेल आइडि, सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै बेला पनि ह्याक हुन सक्छ । अर्थात् अरु जो कोहीले सजिलै चलाइदिन सक्छन् ।
एक विश्लेषणकर्ताको समूहले सन् २०१८ को कमजोर पासवर्डको सूची सार्वजनिक गरेको छ । उसले भनेको छ असाध्यै कमजोर पासवर्ड भएका एकाउण्ट सजिलै ह्याक गर्न सकिन्छ र डेटा चोर्न पनि सकिन्छ ।
सन् २०१७ मा पनि कमजोर पासवर्डको सूचीमा रहेको आइ लभ यू यस पटक पनि १० औ नम्बरमा कमजोर पासवर्डमा रहेको छ । यस्तै १२३४५६ पनि कमजोर पासवर्डको सूचीमा रहेको छ ।
स्प्लेस डाटाकाअनुसार संसारको सबैभन्दा खराब पासवर्डमा १२३४५६ रहेको छ । यो पासवर्ड दोस्रो वर्ष पनि खराब पासवर्डमा दोरिएको छ । उसले सोमबार जारी गरेको विवरणमा २५ खराब र कमजोर पासवर्डको सूची सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले संसारका करिब ५० लाख बढी एकाण्उटको अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा १० प्रतिशत बढीले सबैभन्दा खराब पासवर्ड प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।
उक्त सूची जारी गरेसँगै कम्पनीले भनेको छ हरेक एकाण्टको पासवर्ड पनि फरक फरक राख्नुस, किनकी एउटा एकाण्ट ह्याक भएपनि अर्को सुरक्षित रहन सक्छ । ह्याकरहरुले सामाजिक सञ्जाल, इम्ेल एमाण्टलाई सधै निशाना बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसबाट बच्नका लागि पनि कमजोर पासवर्ड भन्दा सबल पासवर्ड नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
तामाको भाँडामा भुलेर पनि नखानुहोस यी खनेकुरा
‘एमबाप्पे नेमार भन्दा अब्बल छन र रियल मेड्रिड गएपछि रोनाल्डो भन्दा उत्कृष्ट हुनेछन्’